मस्कारा खरिद गर्दा यस्तो मस्कारा रोज्नुस् - Samachar PatiSamachar Pati
५ चैत । यस्ता महिला सायदै हुन्छन्, जसलाई मेकअपको आधारभूत ज्ञान हुँदैन । यस्ता महिला सायदै हुन्छन्, जो सौन्दर्य प्रशाधनबारे बेखबर हुन्छन् । अधिकांश महिलालाई मेकअपबारे जानकारी हुन्छ, सौन्दर्य प्रसाधनबारे थाहा हुन्छ ।
जान्नुहोस् ! ज्योतिष शास्त्रका अनुसार यी पाँच राशिका व्यक्ति शिक्षण पेशा अँगाल्नु राम्रो मानिन्छ
जान्नुहोस ! हिन्दूहरूको शुभ कार्यमा बत्ती बाल्नुको कारण यस्ता रहिछन
जुत्ता लगाए पछि गन्हाउने समस्या छ ! यसताे गरर्नुर्हास्